Ny votoatin'ny rakitra: SIGLENT SVA1015X Spectrum Analyzer - Infinite-electronic
HomeNewsNy votoatin'ny rakitra: SIGLENT SVA1015X Spectrum Analyzer
Ny mpandalina Spectrum SIGLENT SVA1015X dia fitaovana tena matanjaka sy mavitrika ho an'ny famaritana samihafa ao anatin'ny halavany hatramin'ny 9 kHz ka hatramin'ny 1.5 GHz. Ny mari-pamantarana lehibe fototra no fototry ny zavatra rehetra misy sy ny zavatra ilaina sy ny endri-javatra. Ny ambany DANL (avoitra mahazatra) amin'ny -156dBm sy ny habetsahan'ny RBW (1Hz - 1MHz) dia ahafahan'ny mpampiasa mahita marika kely sy kely. Ny mpamorona fanaraha-maso dia tafiditra ho laharana ary manome fahafahana ny mpampiasa hampiasa fepetra amin'ny fandefasana scalar eo amin'ny telegrama, sivana ary zavatra hafa. Hatreto, ny zava-drehetra, izay azo antenaina amin'ny sehatra mpandinika fototra dia efa eo an-toerana. Saingy mbola misy azo atao amin'ny SVA1015X.
Ny iray, mandritra ny fotoana fohy, ny fepetra mahazatra dia ny fahafahana mampihena ny fanombohana EMI na ny fandrefesana ny fanarahan-dàlana. Ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha androany, IoT-fitaovana sy Switched Power Power dia manana loharano maro ho an'ny olana EMI. Noho izany, ny fepetra voalazan'ny EMI eo alohan'ny fanarahana ny fanarahan-dàlana sy ny famoahana ireo dingana rehetra mandritra ny famolavolana dia tena ilaina. Siglent dia manolotra vahaolana azo antoka ho an'ny SVA1015X izay azo vidiana sy amidy amin'ny fotoana rehetra. Io safidy io dia manitatra ny filaharan'ny RBW miaraka amin'ny EMI-Filters manokana ary koa ny mpitsikera Quasi-Peak. Ny fametrahana sety ny sombin-tany akaiky (SRF5030 (T)) dia mameno ny laharam-pahaizana debugging entana. Amin'ny fampifanarahana amin'ny LISN dia sehatra lehibe ho an'ny fanatsarana ny fanarahan-dàlana EMI.
Ny tena mahasarika manokana dia ny Vector Network Analysis. Io safidy io dia azo ampiasaina amin'ny fotoana hafa amin'ny manaraka ary ahafahan'ny mpampiasa mamita ny refy S11 sy S21. Ny fandrefesana dia azo aseho amin'ny endrika isan-karazany toy ny X-Y (dB / phase-over-frequency), sarety na Smith. Ny asa mahazatra toy ny fanombohana ny fatran'ny fitaratry ny filtres na ny fampidiran-drivotra fampidiram-bidy / fampielezana na ny angona antena dia mora mora foana. Raha marina ny filazanao ny fahamarinan'ny valim-pifidianana, dia tsy tokony ampitahaina amin'ny VNA feno, na dia eo aza ny zava-misy, saingy ny fampisehoana an'io safidy io dia tena matanjaka.
Raha toa ka tsy mahavita ny fampiharana anao ny 1.5GHz ary mila frequencies avo lenta ianao dia jereo ny SSA3000X Series Siglent. Manolotra vokatra sy safidy tahaka izany izy. Saingy esorina ny safidy VNA. Raha mila vahaolana momba ny fandrefesana VNA eo ambonin 'ny 1.5GHz ianao dia miomàna www.siglenteu.com misy zavatra eny an-dalana.
Ho an'ireo rehetra manontany tena, iza no Siglent ary inona no ataon'izy ireo? Ny Siglent Technologies dia nanomboka tamin'ny famolavolana ny oscilloscope dizitaly tamin'ny taona 2002. Taorian'ny fikarohana sy fampandrosoana nandritra ny 15 taona, ny portfolio-kojakoja dia ahitana oscilloscope dizitaly miaraka amin'ny Bandwidth izay mahatratra 50 MHz ary efa ho 1GHz, oscilloscopes mandeha amin'ny tanana miaraka amin'ny na tsy misy singa fampidiran-dra, fonosana / arbitrary (10MHz ka hatramin'ny 500MHz), DC ny fitaovam-pifandraisan-davitra ho an'ny laboratoara, digital multimetera miaraka amin'ny 4.5 hatramin'ny 6.5digits, mpandinika ny spectrum ary RF-generateurs miaraka amin'ny Bandwidth amin'ny 3.2GHz ary fitaovana hafa amin'ny ankapobeny . Siglent dia manitatra tsy tapaka ny vokatra isan-karazany. Ny drafitra ho an'ny 2019 dia ny famotsorana ireo vokatra vaovao maherin'ny 3 ary hanitatra ny portfolio amin'izao fotoana izao amin'ny tanana iray miaraka amin'ireo fitaovana tsara kokoa ary amin'ny lafiny iray miaraka amin'ny vondrona vaovao vokatra vaovao.
Nandritra io fotoana io, i Siglent dia nitombo ho mpitarika eran-tany amin'ny fitaovana fitsapana elektronika sy fitaovana fitiliana. Ny vokatr'izy ireo dia mampiavaka ireo endri-javatra sy fonosana vaovao miaraka amin'ny fanoloran-tena mafy amin'ny kalitao sy ny fampisehoana
Siglent izao manana birao lehibe telo manerana ny tany. Voalohany, ny foibe any Shenzhen, any Shina. Ny fivoarana sy ny famokarana rehetra dia vita any. Olona 300 mahery no miasa. Maherin'ny 100 ireo injeniera miasa ao amin'ny sampana maromaro, anisan'izany ny fitaovana maoderina, rindrambaiko, drafitrasa indostrialy, fitsapana, ary fitaovana fanabeazam-pandrefesana tontolo iainana, ary koa ekipa manam-pahefana matihanina sy manam-pahaizana teknika
Ny orinasa any Amerika sy Eoropa dia natsangana tamin'ny taona 2014. Ny biraon'ny Amerikanina dia miorina ao Solon, Cleveland / OH ary hatramin'ny nisokafan'ny birao, dia nitombo hatrany ny olona 6 ankehitriny. Miasa amin'ny varotra eo an-toerana, ny serivisy ary ny fanohanana. Ny biraon'i Eoropa dia any Hamburg / Alemana ary navotsotra avy any Chine. Nanomboka nampiasa ny mpiasa tao an-toerana i Siglent tamin'ny Oktobra 2018. Mandritra izany fotoana izany, misy mpiasa telo mikarakara ny Service & Support, Sales and Marketing. Ny tanjona lehibe dia ny manolotra serivisim-pahalalana tsara ho an'ny mpanjifa sy ny mpivarotra varotra ary manatsara sy manatsara hatrany ny vokatra. Ny fanarenana rehetra sy ny kalitao any aoriana dia hatao any amin'ny afovoan-tanànan'i Eoropa.
Ny varotra Eoropeana manontolo dia atao amin'ny Distributors nahazoan-dalana. Ny tombony ho an'ny mpanjifa dia ny hoe ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny mpivarotra Siglent manaraka dia tsy lavitra loatra ary azo atao amin'ny teny eo an-toerana avokoa ny mialoha ny varotra rehetra ary ny hetsika maro azo atao. Raha te hahita ny mpaninjara anao Siglent ianao dia azonao jerena ato amin'ny tranonkala www.siglenteu.com -> Ahoana ny fividianana.
& # X49, nf & # x6f; -e & # x75, @ S & # x69, & # x67, L & # x65, & # x6e, t. & # X63; om